दसैंका लागि असोज १० देखि नयाँ नोट साट्न पाइने, कहाँ-कहाँबाट साट्न पाइन्छ ? (सूचीसहित) - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS दसैंका लागि असोज १० देखि नयाँ नोट साट्न पाइने, कहाँ-कहाँबाट साट्न पाइन्छ ? (सूचीसहित)
दसैंका लागि असोज १० देखि नयाँ नोट साट्न पाइने, कहाँ-कहाँबाट साट्न पाइन्छ ? (सूचीसहित)
काठमाडाैं, ३ असाेज : यसवर्षको दसैंका लागि सर्वसाधारणले असोज १० गतेदेखि नयाँ नोट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार आगामी १० गतेदेखि १७ गतेसम्म सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने छन् ।